အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - Dejero နယူး Compact တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာဦးလွတ်မြောက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Dejero နယူး Compact တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာဦးလွတ်မြောက်
Dejero နယူး Compact တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာဦးလွတ်မြောက်
ဆာဗာကနေဖျော်ဖြေမှု transmission လက်ခံနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှ 1U Form ကို Factor ထဲသို့အစွမ်းထက်လုပ်ဆောင်မှု pack မှာ Dejero + Bond ကြိုးမဲ့ transmitter LIVE
Waterloo, အွန် - Dejero ယနေ့က၎င်း၏ထိန်သိမ်း-တပ်ဆင်ထား၏တစ် All-ဗားရှင်းသစ်၏ပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ Dejero + အသံလွှင့်ဆာဗာတစ်ခုကျစ်လစ်သိပ်သည်း, 1U ပုံစံအချက်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ အဆိုပါတိုက်ရိုက် + 20 / 20 transmitter, တိုက်ရိုက် + VSET, တိုက်ရိုက် + မိုဘိုင်း App ကိုများနှင့်တိုက်ရိုက် + NewsBook အပါအဝင်လယ်ပြင်-based ဂီယာ devices များအနေဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကို transmission ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါသစ်ကိုတိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာ Dual-မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်တိုးမြှင့်ထုတ်လွှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ဒီဇိုင်း RAID hard drive တွေပါဝင်သည်။
"ဒီတိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာထဲမှာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ Dejero အိုင်ပီလင့်များကျော်ကဗီဒီယို transmission ကိုလက်ခံရရှိထို့နောက်ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ကြိုးမဲ့ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ကပ်လျက်တည်ရှိ "ဘရိုင်ယန် CRAM, CEO ဖြစ်သူကလည်း, Dejero။ "ဟုအဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနဲ့အတူဆာဗာတစ်စက်ရုံရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအခန်းထဲမှာသို့မဟုတ်အာကာသ ပို. ပင်ကန့်သတ်သည်အဘယ်မှာရှိမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားအတွက်လျော့နည်းအာကာသကိုတက်ကြာပါသည်။ သတင်းသမားတွေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရတဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်-ဆိုင်းငံ့ကပ်လျက်တည်ရှိကြိုးမဲ့နည်းပညာကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာသို့တိုက်ရိုက်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအားဖြင့်လေထုအပေါ်သတင်းကိုချိုးဖောက်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်တယ်။ "
အဆိုပါ updated 1U တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာကို real-time genlocked ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ရိုက် + က transmitter နှင့်အကျိုးရလဒ်များအနေဖြင့်နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ရိုက် feeds တွေကိုထောက်ခံပါတယ် HD အဆိုပါပလေးအောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ feeds ကြောင်းသို့မဟုတ် SD ဗီဒီယိုကို။ ဗီဒီယိုကအသက်ရှင်ဖို့အပြင်, ဆာဗာကိုလည်းဗီဒီယိုက packages များတစ်ခုသို့မဟုတ်ဇာတ်လမ်းဖြည့်စွက်ဖို့အသံလွှင့်စက်ရုံမှာအသုံးပွုနိုငျသောအခြားဖိုင်တွေတည်းဖြတ်စတိုးဆိုင်-and ရှေ့ဆက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုခံယူနိုင်ပါတယ်။ dual 400W မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတဦးတည်းအာဏာကိုထောက်ပံ့ရေးပျက်ကွက်လျှင်ထုတ်လွှင့်ဆက်လက်သေချာနှင့်ဆာဗာအသုံးပြုနေစဉ်သူတို့ပူ-ဖလှယ်မှုနိုင်ပါတယ်။ ဒေတာ redundancy နှင့်သိုလှောင်ထားသောဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့, တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာယခု21TB RAID hard drive တွေ x ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ဆာဗာအသစ် quad-core တပ်ဆင်ထား Intel က All-နေ့အဘို့ Xeon က high-performance ကို Processor, နေ့တိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရ။
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Dejero နှင့် Dejero တိုက်ရိုက် + ပလက်ဖောင်းမှာရရှိနိုင် www.dejero.com.
ဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ကနေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်, Dejero ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့်ကူညီ, မီဒီယာကုမ္ပဏီများ, အပေါင်းတို့နှင့်အရွယ်အစား၏အဖွဲ့အစည်းများချက်ချင်းများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်စွာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ multiscreen ပရိသတ်တွေရောက်ရှိဖို့။ Dejero'' s ကိုတိုက်ရိုက် + ပလက်ဖောင်းပေါ်-လေကြောင်းတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ရိုးရှင်းစွာနှင့်အွန်လိုင်းရိုးရာနှင့်ထွန်းသစ်စ uplink ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မှတဆင့်။ လက်တော့ပ်နဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်ခရီးဆောင်က transmitter နှင့် software များအပါအဝင်ပလက်ဖောင်း, အသိဥာဏ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု (3G / 4G / LTE ကို Wi-Fi ကို, Ethernet, မိုက်ခရိုဝေ့စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဂြိုဟ်တု) အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖောက်သည်များဗဟိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြသည် Dejero ်အကြောင်းအရာများပေးပို့နှင့်တိုးမြှင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုဘို့မိုဃ်းတိမ်၌ devices များနှင့်တိုက်ရိုက် feeds တွေကို။ Dejero ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပနှင့် Waterloo, အွန်, ကနေဒါအခြေစိုက်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.dejero.com.
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Dejero + အသံလွှင့်ဆာဗာ LIVE
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ Dejero IABM IABM ဒီဇိုင်း & ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို တိုက်ရိုက် + Booster	2014-08-28
ယခင်: Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းတီဗီ Azteca ကိုဘူတာ Upgrade များထဲမှကြံ့ခိုင်ရပ်တည်
နောက်တစ်ခု: လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုအသစ်လွင်ဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု Truck ကားများတွင် Calrec Apollo အသံ Console ထည့်သွင်း